Nhare mbozha Mapurogiramu: Sei Kuvaka, Zvokuvaka, Maitiro Ekusimudzira Izvo | Martech Zone
Mobile Mapurogiramu: Nei Kuvaka, Chii Chaunovaka, Maitiro Ekusimudzira
Chishanu, July 24, 2015 China, July 23, 2015 Douglas Karr
Isu takaona mabhizinesi achibudirira nema mobile apps uye mamwe mabhizinesi achinetseka chaizvo. Chakakosha kune yakawanda yekubudirira yaive iyo kukosha kana varaidzo iyo nhare mbozha yakaunza kutungamira kana mutengi. Zvikuru kune mazhinji eanotambura maapplication aive mashoma ruzivo rwevashandisi, zvakanyanya kutengesa, zvine hushoma kukosha kune mushandisi. Isu takacherechedzawo zvisingaite nharembozha maapplication akagadzirwa asi haana kumbogamuchirwa nekuda kwekushaya simba kwekusimudzira kwekuedza.
Nhare mbozha yekuvandudza inoramba ichidonha mumutengo sezvo makambani mazhinji uye akawanda achinyatso kuvaka masisitimu uye mapuratifomu eapp mobile. Izvo chaizvo zvaunza matambudziko mazhinji kune iyo indasitiri kubvira izvozvi munhu wese ari kutsikisa maapplication. Dambudziko nderekuti haina kukwana mari yakashandiswa pakuyedzwa kwevashandisi, ruzivo rwevashandisi uye kusimudzira ... izvo zvinogadzira kana kuputsa kubudirira kweiyo nharembozha.
Icho chichiri chiitiko chakakosha kuisa mari mauri, iwe unongofanirwa kutsvaga vakaroorana chaivo. Nharembozha maapplication anogona kusimudzira bhizinesi kuvimbika uye kukura kutengesa kwako. Semuenzaniso, isu takavaka yakapusa kushandurwa kunyorera yekemikari kambani iyo yakabatsira vatengi vavo kuti vaite chaiyo kutendeuka kuverenga pasina kudzoreredza kudesktop yavo. Uye, hongu, iyo app yaive neinodzvanya-ku-kufona ficha iyo yakavabvumira ivo kungofonera mutengi wedu kuti vabatsirwe kana kuita odhita.
18% yevatengesi vepamusoro mazana mashanu muUK uye vanopfuura 500% muUS vanopa vatengi chirongwa chekutengesa. Iine hafu yevashandisi venhare vanotendeukira kune maapps kuti vatore zvisarudzo zvekutenga, mabrand anofanirwa kutora nguva yekudzidza zvinodiwa nevatengi uye kugadzira zviitiko zveapp izvo zvinopa zvakanangana nezvinodiwa nevatengi. Asi usati watanga rako guru rinotevera, pane mamwe makiyi ekuchengeta mupfungwa.
Makiyi Ekutora kubva kuUsablenet yazvino infographic:
Chete chetatu chevashandisi veapp mobile vanobvisa maapplication nekuti vakarasa kufarira
30% yevanoshandisa nharembozha vanoshandisa app zvakare kana ikapa dhisikaundi
2 / 3rds evashandisi venhau vanoshandisa pasirese vanoona kuve pachena kwakakosha
54% ezviuru zvemamirioni pasi rose vanoti yakashata nharembozha inogona kuita kuti zvive nyore kwavari kushandisa bhizinesi 'zvimwe zvigadzirwa.
Verenga zvimwe nezvekugadzira yakanakisa nhare mbozha yeApple muUsablenet yemahara Tungamira kune Mobile Mapurogiramu.
Tags: Mobile Anwendungnhare yekushandisamobile app ruzivomobile app usabilitykushandiswa kwesoftware
Iko Kiyi kune Yako Brand Kuwanazve Kudzora kuita Kwemunhu